सोमवार यी सात कम्पनीको साधारण सभा, यस्ता छन् प्रमुख एजेण्डा — Arthatantra.com
Arthatantra.com > कर्पोरेट > सोमवार यी सात कम्पनीको साधारण सभा, यस्ता छन् प्रमुख एजेण्डा
सोमवार यी सात कम्पनीको साधारण सभा, यस्ता छन् प्रमुख एजेण्डा
काठमाडौं । भोलि पुस २८ गते सात कम्पनीको साधारण सभा हुुँदैछ । सोमवार नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था, हिमालयन पावर पार्टनर, प्रोग्रेशिभ फाइनान्स, आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी, मिर्मिरे लघुवित्त, हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेण्ट र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको साधारण सभा हुन लागेको हो ।
नेरुडे लघुवित्तले पुस २८ गते उद्योग वाणिज्य संघ मोरङको सभाहल विराटनगरमा गर्दैछ । कम्पनीले यस वर्ष शेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस शेयर र ५ दशमलव ७९ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनको लागि) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । पुस १० गतेसम्म कायम शेयरधनीले लाभांश पाउनेछन् ।
हिमालयन पावर पार्टनरले सोमवार अम्रपाली ब्याक्वेट भाटभटेनीमा, प्रोग्रेशिभ फाइनान्सले ज्यापू प्रज्ञा भवन भोलगणेश ललितपुरमा र आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीले नक्साल ब्याक्वेट नक्सालमा साधारण सभा गर्दैछन् ।
मिर्मिरे लघुवित्तले धुलिखेल काभ्रेपलाञ्चोकमा सोमवार साधारण सभा गर्दैछ । कम्पनीले शेयरधनीलाई ४५ प्रतिशत बोनस शेयर र २ दशमलव ३७ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनको लागि) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । पुस १७ गतेसम्म कायम शेयरधनीले लाभांश पाउनेछन् ।
हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीले १२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारितका लागि सोमवार साधारण सभा आयोजना गर्दैछ ।
त्यसैगरी, सोही दिन नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीले यस वर्ष शेयरधनीलाई १० दशमलव ५ प्रतिशत बोनस शेयर र ८ दशमलव ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । पुस १३ गतेसम्म कायम हुने शेयरधनीले लाभांश पाउनेछन् ।
२०७६ पुस २७ गते प्रकाशित
२०७६ पौष २७ गते १३:१५ मा प्रकाशित
साल्ट ट्रेडिङको ३५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव, बोनस र नगद कति ?
१४ अर्बको ट्रेजरी बिल सोमवार जारी गर्दै राष्ट्र बैंक, खरीद गर्न क–कसले पाउने ?
सेयर बजार परिसुचक नेप्सेमा २३ अंकको गिरावट !
शिखर इन्सुरेन्सको नाफा १५.४६% ले वृद्धि
ललितपुरको विभिन्न ९ ठाउँमा पाँच घण्टा बत्ती जाने
आज पनि दुई अंकले बढ्यो नेप्से